Qalliinka Oral MN Bukaanka Information Bloomington
qalliin Afka iyo maxillofacial u baahan sano oo dheeraad ah oo tababar ah qalliinka iyo suuxinta isbitaalka ku salaysan ka dib markii qalin jebinta dugsiga ilkaha. Sida Dhakhtar afka iyo maxillofacial, Dr. Keane ayaa maamusha kala duwan oo dhibaatooyin la xiriira afka, ilkaha iyo gobollada wajiga. Dr. Keane falaa baaxadda buuxda oo qaliin afka iyo maxillofacial khibrad laga bilaabo surgery-galaha ilkaha iyo ka saarida xigmad ilig in qaliin daanka saxayo. Tani waxay sidoo kale waxaa ka mid ah farsamooyinka loogu talagalay dib u dhiska qaab-dhismeedka lafta oo la qalliin yar iyo raaxada bukaanka fiicnayn. Waxa uu aqoonsan karaa iyo daaweyn dhaawacyo wejiga iyo jab. Waxa uu sidoo kale aqoonsan karaa iyo daaweyn dhammaan noocyada cudurada afka; daaweynta tani waxaa la isku la University of Minnesota Afka iyo Maxillofacial Service Pathology.
Our shaqaalaha loo tababaray in gacan la xididka (IV) hurdaysiis ama bukaan-suuxinta guud ee naga goob gobolka-of-the-art xafiiska. Bukaan-socodka waxaa si joogto ah loola socdo inta uu socdo iyo ka dib qalitaanka.
Shaqaalaha qalliinka ee Esthesia Care Qalliinka Oral, P.A. waxaa soo maray, caawiyeyaasha qalliinka certified afka iyo maxillofacial, kuwaas oo gacan ka qalliin la suuxin IV iyo suuxinta guud. Shaqaalaha waxaa ku wargeliyay shaqaalaha maamulka, si fiican u yaqaanna ee siyaasadaha caafimaadka iyo caymiska. Dhamaan shaqaalaha waxa laga CPR shahaado.